Posted by ညီလင်းသစ် au 12.3.09
ဖတ်လို့ရတယ်တော့.. အင်းး Spelling က အရေးမကြီးတော့ဘူးလား..စဉ်းစားစရာပဲနော....
(အဲလို အီမေလ် အမလည်း တခါရဖူးတယ်.. အင်္ဂလိပ်လို..။
သူပြောသလိုပဲ.. ဖတ်တော့လည်း အဆင်တော့ အပြေသားး)
ဟုတ်တယ်အစ်ကို ဦးနှောက်က သူ့အလိုလိုဖတ်သွားတာဘဲ..။ စဖတ်တုန်းကတော့ ဘယ့်နှယ့်ဟာပါလိမ့်လို့.. နောက်တော့ဆက်ဖတ်သွားတာဘဲ.။
I can read also.
Yes,I can read. :))
" မြန်မာလိုလည်း ကျနော်ရေးကြည့်သေးတယ် " ဆိုလို့ မမခင်ဦးမေ ရေးတာလေးတွေ သွားသတိရမိတယ်။ ဒီလိုမျိုးခပ်ဆင်ဆင်လို့ ပြောလို့ရမလားပဲ :)
ဟားဟားဟား.. မညိုလေးက တကယ်ပဲ ကြံကြံဖန်ဖန် တွေးတတ်တယ်..၊းD ကျနော့်မှာ စဉ်းစားပြီး ရယ်နေလိုက်ရတာ..။းD